Mila fahasahiranana eo amin'ny fiainana ny olombelona satria ilaina ny mankafy ny fahombiazana. - APJ Abdul Kalam - Quotes Pedia
Isika olombelona dia manana fironana mihintsana amin'ny fifaliana. Raha maharitra ela ilay fifaliana, mieritreritra isika fa io no lalan'ny fiainana. Mitombo ny fanantenanay ary mahatsapa izahay fa ny ara-dalàna vaovao. Izahay dia maka zavatra tsy omena ary tsy lanja izany sahala amin'ny fanananay fony tsy nanana izany.
Saingy tsy tokony hiasa toy izany isika. Tokony hahatsiaro an'izay ananantsika isika ary tokony hisaotra azy. Na inona na inona ananantsika be loatra dia tokony hanome izany amin'ny hafa izay mila izany isika. Hanampy ny fiaraha-monina hihalehibe sy hiroborobo izany tsy misy famoronana tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo mankafy fiainana tsara miaraka amin'ireo tsy sambatra.
Rehefa manjo antsika ny zava-tsarotra, dia mahatsiaro tena mifandefitra isika ary avy eo mahatsapa ny hasarobidin'ny fotoana mahafinaritra izay nanananay. Tsy fantatsika na oviana na oviana ny loza. Noho izany, tokony ho velom-pankasitrahana isika isaky ny fotoana tsara ananantsika.
Rehefa miatrika zava-tsarotra isika dia mahatakatra ny tena lanjan'ny zavatra rehetra mety ho nalaintsika. Rehefa mandalo ny fotoan-tsarotra ary mahita fotoana tsara indray isika dia vao afaka mifaly bebe kokoa hatrany. Izany dia satria fantatsika ny nitiavantsika an'izany na ny maha-tombo-dehibe ny maha-izy antsika dia ny hahazoantsika fahombiazana izay hitantsika ankehitriny.
Mandritra ny fotoan-tsarotra, manary fanantenana isika fa rehefa mivoaka avy ao aminy isika dia mahatakatra ny hasarobidin'ny zavatra nandrisantsika hatry ny ela ela kokoa, ary mbola betsaka kokoa aza. Na izany aza, na ny sarotra, na ny fotoana mahafaly, dia manampy antsika hamolavola ilay olona ahitantsika farany.
Fahasarotana eo amin'ny fiainana dia namoaka sary
Fahasarotana ny fiainana dia mitanisa teny milaza izany
Fanamarihana mahaliana momba ny fanamby eo amin'ny fiainana
Teny momba ny fiainana sarotra
Tsy tokony ho kivy isika ary tsy tokony havelantsika handresy ny olana. - APJ Abdul Kalam
Tsy hoe toe-tsaina ara-tsaina ny mahavelona. Saingy, tonga ny toe-javatra sasany izay ahitantsika ny hanome…
Raha te-hamirapiratra toa masoandro ianao, mandoro toy ny masoandro. - APJ Abdul Kalam
Raha te-hamirapiratra toa masoandro ianao, mandoro toy ny masoandro. - APJ Abdul…